एकासी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? – Namaste Host
April 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on एकासी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं – आइतवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ४ सयले घटेर तोलाको ८९ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अन्य समाचार : प्रकाश सुवेदीले कसको निर्देशनमा टिभीबाट शिल्पा पोखरेलको चरित्र ह त्या गरे? करिश्मा मानन्धरले खोलिन् रहस्य, यस्तो रहेछ बास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस्)
शिल्पा पोखरेलका बिषयमा नायिका करिश्मा मानन्धरले मुख खोलेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘कोहि मनिस सर्वगुणसम्पन्न छैन, सबैमा केही न केही कमजोरी हुन्छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो जिवनमा आएको समस्यासंग आफै जुधिरहेको हुन्छ । ती समस्या उसले चाहेर मात्रै भयेको हुदैन । कलाकार भएको नाताले अन्य क्षेत्रको भन्दा कलाकारको निजि जिवनको बारेमा बढी नै टीका टिप्पणी हुन्छ ,केही हद सम्म सहनु पनि पर्छ ।
तर हदैसम्मको स्तर बिहिन तरिकाले येस्तो बिवाद बनाएको देख्दा अनौठो लागेको छ । सम्मान दिउ सम्मान लिउ । बेलाबेलामा विशेष गरि महिला कलाकार माथी हुने यो व्यबहारले मन खिन्न हुन्छ । के सबै हाम्रा छोरी चेली होइनन्? भोलिको दिनमा यो हामिमाथी पनि पर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । कसैसँग तपाईंको निजि रिस र समस्या छ भने पुलिस प्रशासन जानुस , अदालत जानुस , कानुनको साहारा लिनुस या निजिरुपमा भेटेर समस्या को समाधान गर्नुस । तर आफ्नो पेसाको नैतिकता कायम राख्नुस ।’